Madaxweyne Farmaajo Oo Magacaabay Raysal-wasaare Cusub | Cabays.com
Madaxweyne Farmaajo Oo Magacaabay Raysal-wasaare Cusub
September 17, 2020 - Written by Khalid King
(Cabays Media) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ayaa magacaabay Raysal-wasaare kadib muddo ku dhowr labo billood oo xilkan uu siiyay Raysal-wsaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guulleed.
“Madaxweyne Farmaajo, ayaa xilkaan u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble isaga oo ku soo xushay aqoonta, waayo aragnimada iyo kartida uu u leeyahay inuu sii ambaqaado dadaallada dowladiisu wado.” Sidaa waxa lagu sheegay qoraal lagu shaaciyey magacaabista xilka Raysal-wasaaraha cusub.
Madaxweyne Maxamed Farmaajo ayaa qoraalka lagu shaaciyey magacabaaista Raysal-wasaaraha cusub ku hseegay in la ” faray Raysal-wasaare Rooble In uu deg-deg ku soo dhiso Xukuumadd tayo leh oo Soomaliya u horseedda in ay ka dhaqan geliso doorasho , dadaal muuqdana gelisa sidii loo xoojin lahaa guulaha laga gaadhay amniga, dib u dhiska Ciidamada Qalabka sida, horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha, baahinta adeegyada aas-aasiga ah, kamidho dhalinta dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab iyo musuqmaasuqa”
Magacaabidan ayaa kusoo beegantay saacado kadib markii Muqdisho lagusoo gabagabeeyay shirkii arimaha doorashada, iyadoo loo malaynayo in magacaabistiisu qayb ka ahayd heshiiska Muqdisho lagu gaadhay.
Raysal-wasaaraha ayaa la magacaabay wakhti kala guur siyaasadeed ah oo la isku diyaarinayo doorashada Soomaaliya oo muran badani ku gadaaman yahay qaabka ay u dhacayso iyo xili mucaaridad xoogani kaga kacsan tahay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo.
Raysal wasaarihii xilka laga qaaday, Xasan Cali Khayre ayaa bogga uu ku lee yahay Twitter-ka ku hambalyeeyey Raysal wasaraha cusub. Raysal Wasaare Rooble ayaa la sheegay in uu ahaa rag ka mid ah kuwo ay isku dhawaayeen Khayre.
Raysalwasaaraha cusub magacaabistiisa ayaa sidoo kale waxa ay muujinayasaa in Raysal-wasaare Mahadi Maxamed Guuleed oo xilkaa sii hayey, uu sii hayey kuris aanu u qalmin, isla markaana loo quudhayn. Lama oga in Raysal -wasaare ku xigeen cusub sidoo kale loo magacaabi doono xilka uu Mahdi inta uu ka dalacay hadana laga riday.
La soco warkan oo wixii ka so kordha